साउदी अरबको नयाँ कानुन, अब महिला स्वतन्त्र
साउदी अरबमा नयाँ कानून लागू भएको छ। अब साउदी महिलाले पुरूष अभिभावकको अनुमतिबेगर यात्रा गर्न, सम्बन्ध विच्छेद गर्न र ‍औपचारिक कागजपत्रका लागि आवदेन दिन सक्नेछन्।
साउदी महिलाले नयाँ कानूनको स्वागत गर्दै पुरातनवादी सोचको प्रतिरोध अब समाप्त हुने बताएका छन्। अभिभावकत्वको कानूनले साउदी अरबका महिलाको लैङ्गिक र सामाजिक भूमिका साँघुरो र सीमान्तकृत बनाउँदै गएको छ।
नयाँ कानूनको धेरै लामो समयदेखि प्रतिक्षा भइरहेको थियो। अहिले यो साउदी अरबको सुधार कार्यक्रमको केन्द्रीय विषय बनेको छ। कठोर कानून र परम्पराले साउदी अरबलाई विश्वकै दमनकारी देश बनाएको छ।
राजधानी रियाधमा नयाँ कानूनबारे महिलाले खुलेर प्रशंसा गरेका छन्। उनीहरूलाई साउदी अरबको पुनर्जन्म बताए। यसले साउदी अरबका महिलाको अवस्थामा धेरै सुधार ल्याउने उनीहरू बताउँछन्।
‘मेरा लागि यसको ठूलो महत्व छ। अब समय आएको छ,’ उमेरले तीसको दशककी महिला अजाहले भनिन्,‘सन् २००० मा बुवा बित्नुभयो। पासपोर्ट नवीकरण गर्दा प्रत्येक पटक समस्या भोग्नुपरेको छ। सन् २०१८ मा कुनै अभिभावक नभई मैले पासपोर्ट नवीकरण गर्न सकें। पासपोर्ट कार्यालयमा एक्लै सङ्घर्ष गर्नु रमाइलो अनुभव हुँदैन। अझ धेरै स्वतन्त्रता आउनेछ भन्नेमा मलाई विश्वास छ।’
‘पुरातनवादीले आँट गरेर कुनै गतिरोध खडा गरे असफल हुनेछन्। भर्खर सुरूवात भएको छ। साउदी अरबका अधिकांश युवा तयार छन्। हो, यात्रा सुमधुर हुने छैन। समानताको लडाइ कहिले पो सजिलो थियो र? तर प्रक्रिया सुरू भएको छ। साउदीको पुनर्जन्म भएको मैले अनुभव गरेकी छु। भविष्य उज्यालो देखिन्छ। हामी उत्साहित छौं र उत्तिकै दृढ पनि।’
नेसनल फ्यामिली सेफ्टी प्रोग्राम (एनएफएसपि)का कार्यकारी निर्देशक डा. माहा अल मुनिफ भन्छन्,‘पुरूषमाथि निर्भरताको अन्त्य भएको छ। हामी बलियो र सशक्त अनुभव गरिरहेका छौं। यसले मलाई महिलाको हुनुको पूर्णता दिएको छ। मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट मात्र नभएर व्यवहारिक तहमा पनि हामी पुरूष बराबर छौं भन्ने यसले देखाएको छ। यो परिवर्तनले महिलालाई चाहेको ठाउँ जान, व्यवसाय गर्न, सम्मेलनमा सहभागी हुन, सिक्न र थप सशक्त बन्न सहयोग गर्नेछ। यसले दुर्व्यवहारमा परेका महिलाको अवस्थामा नाटकीय सुधार ल्याउनेछ किनभने अभिभावकत्वको कानूनबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावितहरू प्राय: घरेलु हिंसाबाट पीडित छन्।’
३२ वर्षीया एमबिए ग्राजुएट अबिर मुबारक बिन फहाद अहिले कामको खोजिमा छिन्। उनी पनि एकदमै उत्साहित छिन्। परिवर्तनको प्रभाव पुरूषका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भएको उनले बताइन्।
‘परिवर्तनमा बानी नपरेका र समानताको विरोध गर्दै आएका साउदी पुरूषका लागि नयाँ कानूनले के अर्थ राख्छ भन्ने प्रश्न हो,‘ उनी भन्छिन्,‘पुरातनवादीले केही गर्न सक्दैनन्। उनीहरूले कानून पालना गर्नुको विकल्प छैन। नभए हामीलाई छाडेर मरूभूमि जान सक्छन्। त्यहाँ कुनै कानून, कुनै नियम छैन। मन लागेको गर्नसक्छन्। त्यही रमाउन सक्छन्।’
उत्तरी साउदी अरबको शहरमा एउटा सार्वजनिक अस्पतालकी ३५ वर्षीया नर्स वसन हाडी आलेञ्जी सावधान छिन्। ‘हामीकहाँ रियाधभन्दा बलियो र कडा परम्परा छ। यसले महिलालाई बढी प्रभाव पार्छ। तर खासमा तपाईँको अभिभावक को हो भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। साउदीका सबैजसो साना शहरमा परम्परा नै नियम हो। तीमध्ये केही इस्लामविरूद्ध भए पनि लागू हुन्छ। तर मलाई थाहा छ मेरी दश वर्षे छोरीले मेरोजस्तो अनुभव गर्ने छैन। उनीहरूका लागि संसार एकदमै भिन्न हुनेछ।’
‘देश कति छिटो परिवर्तन भइरहेको छ। म बसेको शहरमा नर्सको काम गर्ने महिलालाई मानिसहरू नानाभाँती भन्थे किनभने उनीहरू मिश्रित वातावरणमा काम गर्छन्। पुरूष उनीहरूलाई बिहे गर्न चाहँदैन थिए। अब यस्तो हुँदैन। हामी अघि बढिरहेका छौं। अगाडि के हुन्छ थाहा छैन तर हाम्रो धर्मको आधारमा हुनेछ भन्ने आशा छ। धर्मको आधारमा निर्माण गरिएको संस्कारमा कहिले विवाद हुने छैन।’
केही सुधारबारे वसनले सावधानी अपनाउन आग्रह गरेकी छिन्। ‘आशा गर्छु उनीहरूले थप मिश्रित स्थानलाई बढावा दिने छैनन् र बिना कुनै रोकटोक समाजमा त्यसलाई सामान्यीकरण गर्ने छैनन्,’उनले भनेकी छिन्।
तर, २७ वर्षीया फातिमा अल अब्द्राबल्नबीले परिवर्तनको गतिले नयाँ यथार्थ सिर्जना गरिरहेको बताइन्। ‘पुरातनवादीले यसलाई अङ्गिकार गर्नैपर्छ। महिलाले अब सवारी साधन चलाउने छन्। मानिसहरू अहिले यसबारे कुरा गर्दैनन्। सवारी साधन चलाइरहेका महिला जताततै देख्न सकिन्छ।’
Published Date: Sunday, 4th August 06:39:16 AM